Etu esi ede abụ: ndụmọdụ na aghụghọ dị mkpa iji nweta ya | Akwụkwọ ugbu a
Otu esi ede uri
Encarni Arcoya | 09/09/2021 17:00 | Abụọ
Ide uri adịghị mfe. Enwere ndị nwere akụrụngwa karịa, na ndị hụrụ ya ihe gbagwojuru anya ime ka ọ zuo oke. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ ka esi ede egwu, enwere ndụmọdụ ụfọdụ anyị nwere ike inye gị nke ga -enyere gị aka ijide n'aka na nke ahụ abụghị nsogbu.
Ị chọrọ ịma ihe bụ igodo ide abụ? Kedu ka esi ede abụ ịhụnanya, nostalgia ma ọ bụ echiche efu? Mgbe ahụ egbula oge, n'okpuru anyị na -egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma.
1 Dee egwu, gịnị ka ị kwesịrị ịma tupu ịme ya?
1.1 Ihe ndị ọzọ ị ga -echebara echiche
2 Ndụmọdụ maka ịde uri
2.1 Mara ihe ị ga -ede uri banyere ya
2.2 Ịmụta okwu egwu
2.3 Kọwaa nke ọma gbasara ozi na ebumnobi ị na -achọ
2.4 Jiri ihe atụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha
2.5 Jikwaa akụkụ nile nke abụ
2.6 Kpachara anya maka akara edemede
2.7 Ozugbo ị gụchara, gụọ uri
2.8 Na -amụ abụ
Dee egwu, gịnị ka ị kwesịrị ịma tupu ịme ya?
Tupu ịmalite onwe gị ide abụ, enwere ụfọdụ echiche bụ isi nke ị na -enweghị ike ịhapụ, n'ihi na mgbe niile, ha bụ ihe dị mkpa na abụ. Otu n'ime echiche ndị ahụ metụtara ihe dị na abụ. Ị ma ihe ejiri mee ya?
na abụ nwere ihe atọ mkpa:
Otu amaokwu, nke bụ ahịrị ọ bụla nke abụ nwere.
Stanza, nke bụ n'ezie amaokwu nke enwere ike ịgụ n'otu oge wee yie paragraf.
A rhyme, nke bụ ihe amaokwu ndị ahụ kwekọrọ. Ugbu a, n'ime ukwe ị nwere ike ịhụ assonance, mgbe naanị ụdaume dabara; mgbochiume, mgbe ụdaume na mgbochiume kwekọrọ; na amaokwu efu, mgbe ị na -agụghị amaokwu ọ bụla (nke a bụ nke kacha ọhụrụ). Ọmụmaatụ nwere ike ịbụ "Ọ bụ ezie na enwe na -eyi uwe silk / mara mma nọrọ". Dịka ị pụrụ ịhụ, njedebe nke amaokwu a dabara na nke ọ bụla, nke a na -akpọkwa ụdaume mgbochiume. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị asị «Mgbe etiti abalị bịara / nwa ahụ wee bee ákwá, / narị anụ ọhịa tetara / anụ ụlọ ahụ wee dị ndụ ... / ha wee bịaruo nso / gbatịa ruo nwata ahụ / narị olu ha. , na -agụsi agụụ agụụ / dị ka oke ọhịa mara jijiji. Ọ bụrụ n'ịhụta, uri a nke Gabriela Mistral (Romance nke anụ ụlọ nke Bethlehem) na -enye anyị dị ka Nwa mmekpa ahụ, dị ndụ ma maa jijiji; dị nnọọ ka ha tetara ma na -abịarukwu nso. Ha na -ejedebe na ụdaume, ma ọ bụghị na mgbochiume.
Ihe ndị ọzọ ị ga -echebara echiche
Echiche ọzọ bụ isi maka otu esi ede abụ bụ usoro. Nke a bụ nchịkọta mkpụrụokwu dị n'amaokwu ma ọ dị ezigbo mkpa n'ihi na amaokwu ọ bụla ga -enwerịrị ọtụtụ mkpụrụedemede metụtara okwu ikpeazụ. Ọ bụrụ na okwu ahụ bụ:
Ọmarịcha: otu mkpụrụokwu ọzọ.
Llana: nọrọ ebe ị nwere.
Esdrújula: A na -ewepụta otu nkeji nkeji.
N'ezie, mgbe ahụ enwere ike inye ha ikikere abụ dị ka synalepha, syneresis, hiatus, wdg. nke ahụ ga -agbanwe mita nke amaokwu ma ọ bụ abụ niile.
N'ikpeazụ, ị ga -eburukwa usoro ahụ n'uche. Nke ahụ bụ, ka amaokwu dị iche iche ga -esi rhyme ma wuo ya. Ekwesịrị ịsị na enwere ụdị dị iche iche, na nke ọ bụla nwere ike nwee ahụ iru ala na otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Ndụmọdụ maka ịde uri
Mgbe ị na -eche ihu na oghere ahụ, ị ​​ga -edo anya nke ọma ka esi ede abụ, nke ahụ na -agakwa n'ihe ndị a:
Mara ihe ị ga -ede uri banyere ya
Ịde abụ ịhụnanya abụghị otu na asị asị. Ọ bụghịkwa otu ihe ahụ ide abụ dị adị karịa uri egwu efu, ma ọ bụ nke nwere otu isiokwu. Tupu ịmalite onwe gị, ị ga -amatarịrị ihe ịchọrọ ide maka ya, n'ihi na itinye onye ọ bụla na -eme ahịrịokwu ndị na -ada ụda n'ekwughị okwu ọ bụla, mana ụda na ịkọ ihe adịlarị mgbagwoju anya.
Ịmụta okwu egwu
Ebu abụghị akwụkwọ akụkọ nke ị nwere ike ịgbasa ihe ị chọrọ, ọ bụghịkwa akụkọ dị mkpirikpi ebe ị na -eji akụkọ nwere oke okwu na -akọ akụkọ. N'ime abụ, ị ga -eme ka mkpụrụ okwu mara mma, ọ bụghị naanị n'ihi okwu, kamakwa n'ihi ụda, ụda ...
Kọwaa nke ọma gbasara ozi na ebumnobi ị na -achọ
Ọ dị mkpa na, na mgbakwunye na ịmara ihe ị ga -ede maka ya, ị ga -eburukwa n'uche kedu ihe ị chọrọ ịkọ, kedu ihe bụ ebumnuche ide abụ a, ma ọ bụ ihe ịchọrọ ka onye na -agụ ya nwee mmetụta mgbe ọ na -agụpụtara gị ya.
Jiri ihe atụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha
Metaphors bụ a ihe eji mara abụ, na ha na -ejekwa mma asụsụ ahụ. Ugbu a, pụọ na ndị amalarị na onye ọ bụla na -eme ma mepụta nke gị. Ọ dị mma ịdabere na ha, mana ejirila "pearl igirigi" ma ọ bụ "igbochi agụụ mmekọahụ" mee ihe nke ukwuu, yabụ na ha agaghị amasị ndị na -ege gị ntị.
Jikwaa akụkụ nile nke abụ
Anyị na -ekwu maka rhyme, mita, ọnụ ọgụgụ amaokwu, nhazi ... Tupu ị daa, chọpụta etu ị chọrọ ka abụ a bụrụ iji wee rapara na ya. Ya mere, ị nwere ike tinyekwuo akụkụ, ma ọ bụ kwuo ihe ịchọrọ na abụ dịka ọ nwere mbido, etiti na njedebe.
Kpachara anya maka akara edemede
Na ị na -ede otu egwu apụtaghị na ekwesighi ịkwanyere akara edemede. Agbanyeghị na enwere ike nwekwuo mgbanwe, nke bụ eziokwu bụ na ị ga -ejikwa ha, ọkachasị kwụsịtụ n'etiti amaokwu na stanzas.
Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike chọpụta na ozi gị toro ogologo nke na onye na -agụ ya echetaghịkwa etu o siri bido, ma ọ bụ na ọ kwụsịtụrụ iku ume wee bechapụ isi okwu abụ.
Ozugbo ị gụchara, gụọ uri
Ọ bụ ụzọ kachasị mfe lee ma abụ uri n'ezie "nwere ndụ." Kedu ihe bụ ihe ahụ? Ọ dị mma, ọ bụ ịma ma ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ nwere ụda, ụda olu, ihe ọ pụtara yana ọ bụrụ n'ezie na -eme ka ị kpalie ihe. Ọ bụrụ na mgbe ị gụrụ ya adịghị ka ọ nwere ndụ ma ọ bụ jide, enwela nkụda mmụọ wee nwaa ọzọ.
Ihe dị mkpa na ihe ị kwesịrị ịnwale bụ ịgwa n'ahịrị ole na ole ihe niile ịchọrọ, na okwu ọ bụla na -ebu oke mmetụta nke bụ ihe na -eme ka usoro ahụ niile bụrụ "uri".
Na -amụ abụ
Ikpeazụ ndụmọdụ anyị na -enye gị bụ nke ahụ mụọ ihe niile gbasara ụdịrị abụ. Nanị ụzọ ị ga -esi mee nke ọma n'abụ gị ma bụrụ ọkaibe n'okwu a bụ ịmụ gbasara ya. Yabụ, ezughị naanị ịgụ abụ wee hụ ka ndị ọzọ dere akwụkwọ gara aga na ugbu a siri mee abụ, mana ịkwesịrị ịma ihe ntọala, akụkọ ihe mere eme na mgbanwe ọ gbanwere bụ ịchọpụta ụzọ nke gị.
Ị na -amaja ugbu a ịde abụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Otu esi ede uri
Goretti Irisarri na Jose Gil Romero. Ajụjụ ọnụ ndị dere La traductora
Francisco de Quevedo. Ncheta ọnwụ ya. Ụda